Ka hortagga dabiiciga ah: maxaa loogu talagalay iyo sida loo helo | Ragga Stylish
Haddii aad rabto in noloshaadu aysan dheereyn oo keliya laakiin sidoo kale inaad yeelato tayo wanaagsanQaadashada antioxidant-ka dabiiciga ah waxaa loo muujiyey inay tahay mid ka mid ah xeeladaha ugu wanaagsan ee tan lagu gaari karo.
Laakiin maxay faa'iido u leeyihiin? Halkan waxaan kaga jawaabeynaa taas iyo su'aalo kale oo muhiim ah, oo ay kujiraan cuntooyinka aan ka maqnaan karin cuntada dammaanad qaadka joogitaanka wanaagsan ee antioxidants ee jirka.
1 Waa maxay antioxidants?
1.1 Maxay muhiim u tahay in la qaato?
2 Sida loo helo antioxidant-ka dabiiciga ah
2.3 Vitamin A
2.7 Omega 3 iyo Omega 6 asiidh dufan ah
Waa maxay antioxidants?
Jidhku wuxuu xambaaraa maaddooyinka waxyeellada leh (guud ahaan loo yaqaan xagjirnimada bilaashka ah) wasakhda iyo kiimikada darteed. Gabowgu waa mid kale oo ka mid ah geeddi-socodka sababa geedi-socodka gacanta ee loo yaqaan qiiqa.
Tan iyo markii Suurtagal ma ahan inaad si buuxda iskaga difaacdo dhammaan waxyaabaha wasakheysanSidoo kale gabow (si kasta oo ay noloshaadu caafimaad u tahay), si loo xalliyo arrintan muhiimka ah waxaa lagama maarmaan ah in la raadsado caawimaadda antioxidants.
Ku soo bandhig cuntooyinka qaarkood iyo nafaqada, antioxidants-ka waxay jirka ka caawiyaan la tacaalida iyo dhexdhexaad ka dhigida walxahan waxyeelada leh jirka dhexdiisa.
Maxay muhiim u tahay in la qaato?
Asal ahaan, antioxidants waxay kaa caawineysaa inaad dareentid tamar badan. Waxay sidoo kale yihiin mid ka mid ah waxyaabaha ugu dhow isha ilmanimada weligeed jirta ee ilaa hadda la ogaaday. Xagjirnimada lacag la’aanta ah waxay dardar gelin karaan howlaha gabowga dabiiciga ah. Saamaynta waxyeelada leh waa labadaba gudaha (guud ahaan caafimaadka) iyo dibaddaba (duuduubnaanta iyo wareegyada madow). Antioxidants-ka ayaa la dagaallama, kaa caawiya inaad u ekaato oo aad dareento da 'yaraan.
Waa in la ogaadaa in, ka hor inta aanad isku dayin daaweyn cusub ama aanad isbeddel weyn ku samayn cuntadaada, waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato dhakhtarkaaga.
Sida loo helo antioxidant-ka dabiiciga ah
Ku noolaanshaha qaab nololeed caafimaad leh ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu kordhiyo awoodda antioxidant ee jirka. Tixgeli inaad jimicsi sameyso oo aanad ku xadgudbin tubaakada ama aalkolada.
Ku dar cuntooyinka soo socda (inta badan miraha iyo khudradda) cuntadaada waa mid kale waa inay lahaataa markay tahay la dagaallanka xag-jiriinta xorta ah. U fiirso si aad u aragto cuntooyinka aad mar horeba si joogto ah u cuntid iyo kuwa aad ku dari karto si loo wanaajiyo cuntadaada:
Faytamiin C waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah antioxidants-ka ugu wanaagsan. Ahaanshaha ku milma biyaha, waxay ka shaqeyn kartaa dheecaannada jirka. Waxaad ka heli kartaa fiitamiin C miraha liinta, sida liinta, liin macaan, ama bambeelmo.
Sidoo kale loo yaqaan ascorbic acid, khudradda waa koox kale oo cunto ah halkaas oo laga helo tiro badan. Ku dar khudradda cagaaran, yaanyada iyo miraha liinta ee cuntadaada si loo hubiyo qiyaasta wanaagsan ee maalinlaha ah ee antioxidants. Ka fikir inaad cunto dhammaan cuntooyinkan ceyriin, maadaama karinta ay baabi'in karto fiitamiinkan.
Dhinaceeda, fitamiin E waa baruurta milma. Sidan oo kale, waxay ilaalisaa unugyada dufanka leh ee jirka. Waxay kaloo caawisaa joogteynta heerka kolestaroolka caafimaadka qaba iyo yareynta halista cudurrada wadnaha iyo kansarka naasaha. Waxaad ka heli kartaa fitamiinkan antioxidant-ka badarka, saliidaha khudradda, lowska, iyo khudradda cagaaran.
Cunnooyinka hodanka ku ah fitamiin A ayaa muhiim u ah la dagaallanka dhaawaca unugyada. Ku milma dufanka, beta corotene wuxuu leeyahay waxyaabo ka hortagga kansarka. Jidhku wuxuu u beddelaa 'retinol', kaasoo muhiim u ah aragga.
Si aad uga hesho antioxidant-kan dabiiciga ah cuntadaada, tixgeli inaad kamid tahay khudaarta cagaaran ee mugdiga ah, sida saladhka ama isbinaajka, iyo miraha liinta ama jaalle ah, sida kantaloupe, karootada, iyo squash.
Selenium wuxuu ka soo galayaa dhirta dhulka Waana mid aad muhiim u ah in la kordhiyo awooda jirku u leeyahay la dagaalanka cudurada. Tani waa sababta oo ah fitamiinada E iyo C waxay ka caawiyaan inay shaqooyinkooda si wanaagsan u gutaan. Sidoo kale, kaligeed, waxaa la muujiyay inay yareyneyso kansarrada sida sanbabada iyo qanjirka 'prostate'.
Waxaad ka heli kartaa macdantaan gudaha miraha, basasha, toonta, lowska, cuntada badda, iyo hilibka.
Waa carotenoid (mas'uul ka ah midabada cuntooyinka dhirta) oo ka difaaci kara noocyada kala duwan ee kansarka, oo ay ku jiraan kansarka qanjirka 'prostate'. Yaanyada waa ilo wanaagsan oo la awoodi karo. Tan iyo kululaynta waxay sahlaysaa nuugitaankiisa, maraqa yaanyo waa fikrad aad u fiican si loo helo antioxidants dabiici ah.
Waxaa jira iskudhafyo kaladuwan oo aan dhammaad lahayn oo ah flavonoids, ku dhowaad inta badan ee ay jiraan noocyada dhirta. Waxay ka difaaci karaan cudurrada wadnaha, aragga oo xumaada, ama infekshinka. Waxaad ka heli kartaa flavonoids shaah cagaaran, canab, khamri cas, tufaax, shukulaato, iyo berry.
Omega 3 iyo Omega 6 asiidh dufan ah
Waxay ka caawiyaan joojinta bararka iyo, maadaama jidhku uusan keligiis soo saari karin, waxay u baahan yihiin inay ku jiraan cuntada. Xaaladda omega 3 waxaa laga heli karaa kalluunka salmon, tuna, sardines iyo iniinka. Waxaad omega 6 ku heli kartaa saliidaha khudradda, lowska iyo digaagga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Ka hortagga dabiiciga ah